သဂျီးအမျိုးတွေ အနှိပ်ကွပ်ခံနေရဒယ် Atheists | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » သဂျီးအမျိုးတွေ အနှိပ်ကွပ်ခံနေရဒယ် Atheists
သဂျီးအမျိုးတွေ အနှိပ်ကွပ်ခံနေရဒယ် Atheists
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 13, 2012 in Critic, Opinions & Discussion | 18 comments
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ဘာသာမဲ့များကို တိုက်ခိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးကို ပြန်လှန်ဝေဖန်တာ freedomnews မှာတွေ့တော့ တနင်္ဂနွေနေ့က ရာဟူးအင်တာနက်မှာ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း ဘာသာမဲ့များ အနှိပ်ကွပ်ခံနေရကြောင်း ဖတ်မိတာ သွားသတိရတယ်။ ယခုဘာသာပြန်ပို့စ်သည် တဖက်ဘက်လိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဗဟုသုတအလို့ငှာ ဖြစ်ပါဂျောင်း….
ကျနော်ငယ်စဉ်ထဲက ဘာသာမဲ့လို့ ဆိုနိုင်သူတွေနဲ့ မစိမ်းဘူး။ အဖေဆို သူကြီးပြင်းခဲ့ရာ ခေတ်ကာလအရ လက်ဝဲအယူသန်တယ်၊ ကူမြူနစ်မဟုတ်ပေမဲ့ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းမှု အလျဉ်းမရှိခဲ့ဘူး။ အမေကြောင့်သာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ကျနော်နီးစပ်ခဲ့တာ။ ဘကြီးကြတော့တမျိုး.. အသက်ကြီးလာတော့ ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် လုပ်ပေမဲ့ (အတိတ်ကံပဲ ဆိုကြပါစို့) မိုးပြာဂိုဏ်းလို ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီ ဖြစ်သွားတယ်။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်တို့ သဂြိုလ် ဘာကျမ်းညာကျမ်း အစုံဖတ်ရှု မှတ်သားပေမဲ့ အပါယ်လေးဘုံ၊ သံသရာ လက်မခံ။ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာလူသားသက်သက်၊ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် စိတ်ထားပုံ စသဖြင့်..။ သဂျီးဦးခိုင် လူ့ဂွစာလည်း အဲသလို နေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ အနောက်နိုင်ငံက လူအများစု သတ်မှတ်တဲ့ ဘာသာမဲ့ဆိုတာ ထာဝရဘုရားသခင် တည်ရှိမှု လက်မခံသူ ရည်ညွှန်းလို့ မူလအဓိပ္ပါယ် တူချင်မှတူမယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်အယူ လက်မခံတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင် အဲဒီသတ်မှတ်ချက်ထဲ ဝင်သွားပြီ။ တချို့ကြတော့လည်း ဂေါ့ဒ်ကိုလက်ခံပေမဲ့ ဘုရားအားလုံးသည် အတူတူပဲ အယူရှိတာမို့ မည်သည့်ဘာသာနှင့်မျှ မပတ်သက်သူ ခေါင်းစဉ်ထဲ ရောက်ချင်ရောက် သွားပါမယ်။ အမှန်က ရုပ်ဝါဒီစစ်စစ်ကို ပြောတာထင်တယ်။ လက်ဝဲအယူ၊ သိပ္ပံရုပ်ဝါဒလိုမျိုးပါ။ အဲလိုရှုပ်ထွေးမှု အခွင့်ကောင်းယူပြီး လစ်ဘရယ်တွေက ဘာသာမဲ့ ဘယ်မျှရှိနေပြီ လုပ်တဲ့အခါ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေနဲ့ နောင်ဂျိန်ချကြပါတယ်။
ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခ အရေးအခင်းတွေ ကြည့်လိုက်ရင် အယူဝါဒရေးရာလို အပျော့ထည်ပိုင်း၊ အပေါ်ယံ သွင်ပြင်လက္ခဏာလို အမာထည်ပိုင်း၊ သယံဇာတ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုလို ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဆိုပြီး အကြမ်းမျဉ်း တွေ့ရတယ်။ မုန်းတီးရန်လိုမှု ပြသနာဆိုပေမဲ့ အရင်းစစ်လိုက်ရင် မလုံခြုံမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုများမှ အရင်းခံတာပါ။ တဖက်သားက အထင်ကြီးစရာ မကောင်း၊ နိမ့်ကျတယ် သတ်မှတ်လိုက်ရင်တော့ လူ လူခြင်း တန်ဖိုးထားမှုမဲ့သွားပြီး သက်ရှိသက်မဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုကျင့်ပါတော့တယ်။ (စကားစပ်လို့ မဆိုင်ပေမဲ့ ပွားရရင် တဖက်သားက အထင်ကြီးစရာ ကောင်းတဲ့အခါ ကိုယ်ကနိုင်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ထုံးစံဓလေ့ကို လက်ခံကျင့်သုံးတာ တွေ့ရတယ်။ ဥပမာ – မွန်ဂိုဘုရင်တွေ တရုတ်ပြည်သိမ်းတော့ တရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေရဲ့ ဥပဒေထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှုကို သဘောကျလို့ ဆက်ခံကျင့်သုံးတယ်။ အဲဒီမွန်ဂိုတွေပဲထင်တယ် အာရပ်တွေကို နိုင်ပေမဲ့ စစ်ရှုံးသူရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဩဇာခံတယ်။ မဂိုလူမျိုးသည် အဲဒီကနေ ပေါ်လာတယ် ကြားဖူးတယ်။ ဥရောပတိုက် နယ်မြေလုစစ်ပွဲတွေမှာ တဖက်ယဉ်ကျေးမှုကို အထင်ကြီးကြတော့ စစ်ရှုံးသွားလဲ မြို့ပြကြီးတွေ အဖျက်ဆီးမခံရ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေလည်း ရက်ရက်စက်စက် အလုပ်မခံရဘူး။ အာရှ၊ အာဖရိက၊ လက်တင် တောင်အမေရိကတိုက်ဖက် ဒင်းတို့နယ်ချဲ့တော့ မတရားကျွန်ပြု အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ အထင်မှ မကြီးတာကိုး…။ ရုပ်ဝတ္ထု တိုးတက်မှု သိပ်ကွာရတဲ့ကြားထဲ ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံကလည်း မတူတော့ လူရယ်လို့တောင် အသိမှတ်ပြုခဲ့ပုံမရဘူး။ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုစနစ် ၁၉၈၀ခုနှစ်များအထိ သက်ဆိုးရှည်နေခဲ့တာပဲကြည့်။)
အဆိုးဆုံးက ဘာသာတရား အယူဝါဒရေးရာ ပြသနာများမှာပါ။ ဘုရားနာမည်တပ်လိုက်ရင် ဘာလုပ်လုပ် အပြစ် လွတ်တယ်၊ ကုသိုလ်တောင်ဖြစ်တယ် အယူမှားကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဘာသာတရားခေါင်းစဉ်အောက် စစ်ပွဲတွေ၊ ဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အနတ္တဆိုထားပေမဲ့ တကယ်တမ်း ဖြစ်လာတော့ အတ္တ၊ ခရစ်တော်က ကိုယ့်ပါးတဖက် အရိုက်ခံရရင် နောက်ပါးတဖက် ထိုးပေးဆိုပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ လက်သီး၊ မွတ်စလင်မှာ ဘုရားသခင် အလိုတော် ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် မဖြစ်တဲ့အခါ ဓါးကောက်။ ရဟူဒီသည်၎င်း… ဟိန္ဒူသည်၎င်း….
အဲဒီလို မတီးမတော်တွေကြောင့် အနာဂတ်မှာ ဘာသာတရား အခန်းကဏ္ဍ သိသိသာသာ လျော့ကြသွားဖွယ် ရှိတယ်ဘာညာ ခန့်မှန်းတာရှိပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ အလှမ်းအတော်ဝေး ပါသေးတယ်။ နည်းပညာခေတ်ကမ္ဘာမှာ လစ်ဘရယ်တွေ အားကောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်ဝါဒီများရဲ့ အကြမ်းဖက် ခြိမ်းချောက်မှု၊ ဆင်ခြင်တုံမဲ့ တွေးခေါ်မှုများ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေဆဲပါ။ လူ့သမိုင်းတလျောက် ဖြစ်လာတဲ့ အသစ်အဟောင်း ပဋိပက္ခများလို ဘာသာမဲ့နဲ့ ဘာသာတရား အားပြိုင်မှုသည်လည်း နှစ်ပေါင်းရာထောင်သောင်းမက ဆက်လက် တည်ရှိနေပါအုံးမည်။
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် ဘာသာမဲ့များ၊ အစဉ်အလာ ဘာသာရေး ဆန့်ကျင်သူများစွာဟာ မတရားစွပ်စွဲ အဓမ္မ ထောင်ချမှု၊ နှိမ်ချခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ ကြုံတွေ့နေရပြီး အနည်းဆုံး ခုနှစ်နိုင်ငံတွင် ဥပဒေစီရင်ထုံးနဲ့ အပြစ်ပေး အရေးယူနိုင်ကြောင်း တနင်္လာနေ့မှာ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံတွင် ဖော်ပြသည်။
IHEU အဖွဲ့ဂျီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်၌ ဘုရားသခင်အား မယုံကြည်သူများကို အစ္စလာမ်နိုင်ငံများတွင် ဖိနှိပ်မှု အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး အစိုးရနဲ့ ဘာသာရေး အာဏာပိုင်များ၏ နှိပ်စက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
ထို့ပြင် ဘာသာတရား ယုံကြည်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများကို မျက်နှာသာပေး၍ ဘာသာမဲ့များ လူသားဝါဒ ယုံကြည်သူများအား အပြင်လူသဖွယ် ဆက်ဆံသော ဥရောပနိုင်ငံတချို့နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့၏ မူဝါဒများကိုလည်း ထောက်ပြသည်။
အတွေးအခေါ် လွတ်လပ်မှု ၂၀၁၂ အစီအရင်ခံစာ၌ ဘာသာမဲ့များ တည်ရှိခွင့်၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် ထုတ်ဖော်ခွင့်၊ နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့် စသည့်လွတ်လပ်ခွင့်များကို တားမြစ်သော ဥပဒေများရှိနေကြောင်း ဆိုသည်။
သူတို့၏ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ အများနဲ့ဆိုင်သော နေရာများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်၊ အစိုးရ ရုံးဌာနများတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ ဘာသာတရားကို ဝေဖန်လျင် ရာဇဝတ်မှုမြောက်စေခြင်း၊ မိရိုးဖလာဘာသာ စွန့်ခွာသူများအား အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ဥပဒေများဖြင့် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသည်။
ဘာသာ၊ အယူဝါဒရေး လွတ်လပ်ခွင့် ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် Heiner Bielefeldt က အစီရင်ခံစာကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ဘာသာမဲ့များကိုလည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး သဘောတူညီချက်တွင် အကာကွယ် ပေးထားကြောင်း နဲနဲတော့ လူပိုသိလာစေမယ်လို့ တိုတိုတုပ်တုပ် မိတ်ဆက်ထားသည်။
IHEU ကို နိုင်ငံပေါင်း လေးဆယ်ကျော်က လူသားဝါဒ၊ ဘာသာမဲ့၊ အခြားရုပ်ဝါဒီ အဖွဲ့အစည်း ၁၂၀ကျော်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး တနလာင်္နေ့တွင် ကျရောက်သော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထိမ်းအမှတ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံပေါင်း၆၀ကျော်တွင် ပြုလုပ်သောစစ်တမ်းအရ ဘာသာမဲ့ သို့မဟုတ် အခြားဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလျင် သေဒဏ်အပြစ်ပေးသော နိုင်ငံများမှာ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရန်၊ မော်လဒိုက်၊ မောရစ်တန်းနီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံ တို့ဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာ၇၀ပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဘာသာမဲ့များအား လတ်တလော သေဒဏ်အပြစ်ပေးမှုများ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိဘဲ သုတေသီများ ပြောကြားချက်အရ ရံဖန်ရံခါ ပိုမိုသေးငယ်သော ပြစ်ဒဏ်များသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အီဂျစ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကူဝိတ်နဲ့ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံများတွင် ဘာသာမဲ့ဝါဒအမြင်မှ ဘာသာရေးအပေါ် ရေးသားချက်ကို လုံးဝပိတ်ပင် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခြင်းတို့အား အများပြည်သူဆိုင်ရာ စော်ကားမှုအနေနှင့် ပြဌာန်းသည်။
မလေးရှားလို တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ တရားဝင် ဘာသာတရားမှာ သာမာန်အားဖြင့် ခရစ်ယာန်၊ ရဟူဒီနှင့် အစ္စလာမ်တို့ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားများ စာရင်းသွင်း မှတ်ပုံတင်ကြရသည်။
ဘာသာမဲ့နဲ့ လူသားဝါဒ သမားများဟာ တက္ကသိုလ်တက်ရန်၊ ဆေးဝါးကုသခွင့် ရရှိရန်၊ ပင်လယ်ရပ်ခြားခရီး သွားလာရန်၊ ကားမောင်းလိုင်စင် ကိစ္စများအတွက် သူတို့ယုံကြည်ချက်ကို တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများတွင် လိမ်ညာဖော်ပြနေရသည်။
ဥရောပ၊ အာဖရိက ဆာဟာရတိုက်ငယ်၊ လက်တင်နှင့် တောင်အမေရိကတိုက် နိုင်ငံများသည် ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး မရောယှက်သူများ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းမှတဆင့် ပညာရေး၊ အခြားပြည်သူ့ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ကူညီသူများအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံဖော်ရှုမြင်ကြသည်။
ဂရိစ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့တွင် အောသိုဒက်စ် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတော်အား ဝေဖန်မှုများမှနေ အလွန်အကျူး ကာကွယ်ထားပြီး တိုင်းပြည်ဂုဏ်ဆောင် ရတနာအဖြစ် နေရာပေးထားကာ အင်္ဂလန်ဘုရားကျောင်းတော်ဂိုဏ်း ဘုန်းကြီးများကတော့ ဗြိတိသျှပါလီမန် အထက်လွှတ်တော်တွင် အမတ်နေရာ အလိုအလျောက် ရရှိကြသည်။ (အထက်လွှတ်တော်ကို တော်ဝင်မိသားစု၊ မှူးကြီးမတ်ရာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး လွှတ်တော် အဆောင်အယောင် တခုထက် မပိုချေ။ ဤဂါးစကားချပ်)
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် အသိအမှတ် ပြုထားသော်လည်း မျက်မှောက်ခေတ် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းတွင် ဘာသာမဲ့၊ ဘာသာတရား ဖက်တွယ်မထားသူများမှာ အမေရိကန်မစစ်သူ သို့မဟုတ် အမေရိကန်မဟုတ်သူများအဖြစ် တံဆိပ်တပ် ခံနေရသည်။
အနဲဆုံး ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုတွင် အခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များဖြင့် ဘာသာမဲ့များအား အများပြည်သူဆိုင်ရာ ရုံးတာဝန်များမှ တားမြစ်ထားကာ အာကင်န်ဆော ပြည်နယ်တွင် ဘာသာမဲ့သူများ တရားရုံးတော်၌ သက်သေ ထွက်ဆိုခွင့် မရှိပေ။
ဖရီးဒန်းနယူးစ်တွင် ဖော်ပြထားသော စပ်ဆက်သတင်း
အစိုးရပိုင်သတင်းစာက ဘာသာမရှိသူတွေကို တိုက်ခိုက်
မူရင်း ရာဟူးအင်တာနက် ဆောင်းပါး
By Robert Evans | Reuters – Sun, Dec 9, 2012
GENEVA (Reuters) – Atheists and other religious skeptics suffer persecution or discrimination in many parts of the world and in at least seven nations can be executed if their beliefs become known, according toareport issued on Monday.
ကနော်ကတော့ လက်ဝဲ အယူသန်သလိုလို လက်ယာအယူသန်သလိုလို
၀ဲယာ အယူသန်သလိုလို ဘာသာမဲ့လိုလို ဘာသာရှိသလိုလို ဟိုဘာသာလေးကြိုတ်သလိုလို
ဒီဘာသာလေးကြိုတ်သလိုလို လက်ခံကောင်း၏ မကောင်း၏ ။ ဘာသာအားလုံး၏ မိမိနှစ်သက်သော
အပိုဒ်များကို စုဖွဲ့က မိမိတစ်ကိုယ်တော် တစ်ဝါဒ ကိုအကြိုတ်ဆုံးပဲဗျ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာက မိမိနှစ်သက်ရာ ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပေတာကိုဗျ။
သိပ်မကြာတဲ့တနေ့မှာ.. ကိုးကွယ်ရာဆိုတဲ့. ဘာသာသာသနာတွေ.. ကမ္ဘာမြေကပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ..
ခုလောလောဆယ်နှစ်တွေမတော့.. ဘာသာတရားဆိုတာကြီးကို.. အုပ်ချုပ်သူတွေက..အုပ်ချုပ်ခံတွေကိုကိုင်တွယ်.. ထိမ်းကြောင်းရာမှာ.. ကောင်းမွန်အသုံးတဲ့တဲ့.. Tool အဖြစ်သုံးနေတာလို့မြင်မိတယ်..
ယူအက်စ်အစိုးရရဲ့..တကယ့် သင့်တန့်တွေအဲလိုတွေးပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့.. ခံစားလို့ရတယ်..။
ဒဂျီးသိထားဖို့က နောက်ဆုံးရှင်ကျန်ရစ်မယ့်သူဒွေက လူတော်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ
ကမ္ဘာမှာ လူအသတ်ဆုံး.. လူသေမှုအများဆုံးစစ်တွေ.. ပဋိပက္ခတွေက.. ဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်တာချည်းပဲ..
ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့.. မြန်မာပြည်ကြည့်… (အနောက်ဖက်ကမ်း၊မြောက်ဖက်နယ်အရေး)
အခု အစွန်းရောက်တွေအကြမ်းဖက်ကြတဲ့.. ၉/၁၁နဲ့.. သူရဲ့ဆက်နွယ်စစ်ကြီးတွေကိုကြည့်..
တောင်အောက်လဲမနေ တောင်ပေါ်လဲမတက်တဲ့.. ဇော်မမ ကန့်လန့်တွေ. ကြားညပ်တတ်ကြောင်း… :528:
အော်… လူဂျီးများ ဆုံးမရတယ်ခက်….
Forrest Gump ပြန်ကြည့်လိုက်ဦး… ဘယ်လိုမျိုးလူတွေ စစ်ပွဲအပြီး ကျန်ခဲ့သလဲဆိုဒါ
ဘာသာမဲ့ ဆိုတော့လဲ ဘာသာမဲ့ မို့လို့
ဘာသာဝင် ဆိုပြန်တော့လဲ သူ့ဘာသာ နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ မတူလို့
မတူတဲ့ အမြင်တွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးနေကြတာ ပါပဲဗျာ
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတာ အခုအထိတော့ မထိရောက်သေးတာ အမှန်ပဲ
ဘုရားသခင်ရှိတယ် လို့ မယုံကြည်သူ များ ကို အေသီးရစ် လို့ ခေါ်နိုင်ပေမဲ့
ဘာသာမဲ့ ဆိုတိုင်း အေသီးရစ် မဟုတ်သလို အေသီးရစ်တိုင်း လဲ ဘာသာမဲ့ မဟုတ်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။
အေသီးရစ် ထိပ်ခေါင်ကြီး Richard Dawkins ကတော့ ဘုရားသခင်ရှိတယ်လို့ သက်သေပြနိုင်တာနဲ့ သူ ရှိခိုးပါ့မယ်တဲ့။
အေသီးရစ် တွေ ရဲ့ လက်သုံးစကားကတော့ သူတို့ဟာ ဘယ်တော့မှ သူများတွေ ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဘာသာရေးအဆောက်အဦ တွေ၊ ရုပ်ထု တွေ ကို မဖျက်ဆီးဘူးတဲ့။
လက်ရှိမှာ အဲလို ဖျက်ဆီး နေသူတွေဟာ ဘာသာရှိသူ တွေ ချည်းပါဘဲတဲ့။
ဒီစကားဟာ အင်မတန် ရိုးစင်း ပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်အများကြီး သက်ရောက်ပါတယ်။
အဲဒီလို ဘာသာရေး အတွက် ရှေ့တန်းပြပြီး လူတွေအချင်းချင်း အမုန်းပွါး နေရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မလဲ အေသီးရစ် လို့ ဘဲ အခေါ်ခံ ချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ အဆုံးအမ ကို အမှန်တကယ် လက်ခံသူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဆိုရင် အဲဒီ အစွန်းတွေ က လွတ် ကိုလွတ် နေရပါမယ်။
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား ( ဘုရားသခင် ) ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ
ဒါပေသိ ကိုယ်ဒေါ်ဂျီး ကိုဒေါ်လေးဒေကိုလာထိလို့ဂဒေါ့
သဂျီးက သိပ်မကြာခင် ကိုးကွယ်ရာတွေ ပျောက်ကွယ်ကုန်မယ် ဆိုတာကို လုံးဝဆန့် ကျင်ပါတယ်
ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်အများစု ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကို ရောက်လာမယ်လို့မြင်မိပါတယ်
စူပါနေချရယ် စီးရီးကို ကြည့်ရင်း အဲဒီ့အတွေးရတယ်
ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေနဲ့.. သူထောင်ထားတဲ့သံဃာ့ဂိုဏ်းကို.. ခြုံပြောရရင်.. ကျုပ်က..ဘာသာရေး ( religion)လို့လက်မခံဘူး..
.. တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်… ကျုပ်နားလည်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူး..။
Basic Buddhismaphilosophy, notareligion
The Dalai Lama, who is in Washington, DC foraten day event, has written: “I have come to the conclusion that whether or notaperson isareligious believer does not matter much. Far more important is that they beagood human being.”. . . “That is why I sometimes say that religion is something we can perhaps do without.”
It seems many in the West agree with the spiritual leader, as millions report that they incorporate Buddhist practices such as meditation or mindfulness into their own spiritual activities without necessarily adopting Buddhism as their religion.
1. While teaching religion in the University of Hawaii, onaHonolulu walk one day I wandered intoaBuddhist temple, openedahymnal at random, and read these words: “Buddha loves me. This I know, for the sutras tell me so.” That is religious. The deity (Buddha) loves the devotees, & they reciprocate his love by gratefully singing his praise. In the original, which was the hymn’s model, the deity is Jesus Christ as incarnate second Person of the Holy Trinity, and the worshipers are Christians: “Jesus love me. This I know, for the Bible tells me so.” (Albert Schweitzer, world-eminent both in musicology and in Bible, asaChristian medical missionary used these words to explain to his black-African patients why he cared about them.)
2. But Gautama (later called “the Enlightened” [i.e., “Buddha”]) wasaphilosopher who walked away from Hinduism’s 30,000 deities (as well as from his family) and whose original followers did not consider himadeity. Originally, Buddhism was notareligion; and the Dalai Lama, in saying “religion is something we can perhaps do without,” is returning to square one. He’s right in step with millions in the West who are saying “I’m not religious, but I’m spiritual.” And, like them, he says morality (being “a good human being”) is “far more important” than religion.
3. As the West’s Enlightenment was one kind of Christian protestantism, Buddhism was one kind of protestant Hinduism. Early in the 19th century, Christian philosopher Soren Kierkegaard remarked that “enlightened” movements degenerate into moralism (the good trumping the holy), which then degenerates into narcissistic aestheticism (the individual’s notion of the beautiful, trumping the good). Said he, while human beings haveaGod-given moral sense of right/wrong, good/evil, it is fragile. For health and strength, it needs the support of our God-given religious sense. Meditation and “mindfulness” are self-conscious manipulations of attention: they are not religious.
4. “The urge to worship sparked civilization” said the lead article in last month’s National Geographic. The Gobekh Tepe Temple (in southern Turkey), built by hunter-gatherers 11,600 years ago (7,000 years before Stonehenge), proves that “The Birth of Religion” (the article’s title) preceded the birth of cities, which were preceded by the birth of agriculture. Contrary to the Dalai Lama’s “conclusion,” religion as worship is not “perhaps something we can do without.” Efforts to eliminate religion haveasorry history,asophomoric present, andaforeboding future.
5. America’s political founders spoke and wrote of “the Creator,” “Providence,” and “nature’s God.” They could have said (as some today are beginning to say) “We’re not spiritual, but we are religious.” And they spoke of our religious, emotional, aesthetic, moral, and rational powers and our rights as “God-given.” I doubt that the American civilization can survive the death of this language in our public schools.
6. Finally, On Faith’s two questions:
(1) “Does religion aid or hinder the spiritual journey?” Good religion aids, bad religion hinders. Our present-day culture of multiculturalism forbids our judging among the religions with, ironically, the exception of Christianity: we are free to criticize it. But the question is prejudiced against “religion” (which is viewed as an optional means) and for “spirituality” (viewed as the individual’s goal).
(2) “Can you practice Buddhism without becoming Buddhist?” Yes, if Buddhism is defined as meditation, mindfulness, and (as, now, the Dalai Lama) being good. But no, if Buddhism is defined not asaphilosophy (as Gautama, the founder) or as attentional exercises or as morality but asareligion with Buddha as its deity (”Buddha loves me….”).
Willis E. Elliott | Jul 8, 2011 10:41 AM
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ဂါ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ပြောရရင် ဘဝတလျောက်နေနည်းအတတ်ပညာ art of living ပါ။ သုံးသူအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သေချာတာတော့ ရုပ်ဝတ္ထုကြွယ်ဝမှု တခုထဲ ဇောင်းမပေးဘဲ အပြစ်ကင်းတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုပါ တွဲဖက်တယ်။ အောက်အဆင့်မှာ သူများတွေလို စောင့်ထိန်းမှု ဖြစ်တာမို့ ဘာသာလား၊ ဒဿနိကလား၊ အကျင့်လား မကွဲပေမယ့် ပညာပိုင်းရောက်တဲ့အခါ လွတ်မြောက်မှု ဖြစ်သွားလို့ တူသူမရှိ သီးသန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ မယုံရင် တူတဲ့အတွေးအခေါ် ဘာသာ အကျင့် ယုံကြည်ချက် ကြိုက်ရာရှာကြည့်ပါ။ အဲလို လွတ်မြောက်ဖို့ သွားရာလမ်းကြောင်း မှန်နေမှ အောက်ထစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သီလ သမာဓိ ပညာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ လောကုတ္တရာ အမြင်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ လောကီအမြင်နဲ့ကို အဲဒီဘောင် လက်ကိုင်ပြုရင် ဘုရားထားခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်။ ဥပမာ အရက်လေး တမြမြနဲ့ သမ္မာသမာဓိ မဖြစ်ဘူး။ ကြက်သက် ဝက်သတ် သူတပါး သားမယား ပြစ်မှားနေပြီး တရားအားထုတ်လို့ မရဘူး။ ဟိုဟိုဒီဒီ တွေးခေါ်နေ သံသယများနေရင် တရားမဖြစ်ဘူး။ ဖြစ်ခြင်းဖြစ် သဂျီးလို မိစ္ဆာဒိဠိဖြစ်မယ်။ ဘုရားလက်ထက်က ပါရမီရှင်တွေနဲ့ မနှိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။
“ အောက်အဆင့်မှာ သူများတွေလို စောင့်ထိန်းမှု ဖြစ်တာမို့ ဘာသာလား၊ ဒဿနိကလား၊ အကျင့်လား မကွဲပေမယ့် ပညာပိုင်းရောက်တဲ့အခါ လွတ်မြောက်မှု ဖြစ်သွားလို့ တူသူမရှိ သီးသန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ”
အောက်ခြေ/အကာ ကိုချည်း အပြင်ပန်းကြည့် ဆုံးဖြတ်စောမသွားကြပါနဲ့
ပညာပိုင်း/အနှစ်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားကြပါလို့..
ငါ၏ခန္ခာကိုယ်ကြီးကိုရှိခိုးနေခြင်းအားဖြင့်ဘာမှအကျိုးမရှိ၊မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိအားကိုးကွယ်ပါလို့ဆိုထားတာကို အတင်းကြီးကိုကွယ်ပြီးနေကြတော့ခက်တာပေါ့၊တကယ်တမ်းပြောရရင် သူပြောခဲတဲ့စကားတွေကိုဆန်ကျင်
နေသလို့ပါဘဲ၊ဘယ်သူမဆိုသူကိုကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြရ မှာပေါအခုတော့ ကိုယ် လို့ချင်သလို့တွေးပြီးဘာသာတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်ကြတောခက်လှတာပေါ၊
ထာကိုဖြည်စွက်ပြီးတရားသစ် ဘာသာသစ်တစ်ခုကို ထူထောင်နေကြတာလားဆိုတာကို သေသေချာချာ
စားကြပါ၊ ဘာသာတရားတော်တော်များများက စတင်ဟောပြောခဲ့တဲံပုဂ္ဂိုလ်မရှိပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်လို
ချင်တာတွေ ဖြင်္ညစွက်ပြီး မူရင်းအလိုသဘောတွေ ပျက်စီးသွားကြတင်္ယလို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။
ဘယ်ခုနှစ်မှာ ဘာသာသနာဘဲရှိတော့မယ်ဆိုတာကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါရဲ့
ဒါပေမယ် ဘယ်သူဘာဘဲပြောပြော လူသားတစ်ယောက်ဟာသူရ၇ှိထားတဲံပုံစံအတိုင်း
ညွန်ကြားချက်အတိုင်း လူသားဟာရှင်သန်နေရတာပါ၊လူသားဟာ မိမိစိတ်ကြိ်ုက်ငြင်းဆန်နိုင်တာဆိုလို့
မှာ တွေးခေါ် နေကြရတာကို သေသေချာချာလေ့လာရင်တွေရမှာပါ၊ ကျန်တာတွေကတေ့ လူသားဟာ
သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ခုသောညွန်ကြားချက်အောက်မှနေရတာပါ၊ ဥပမာ။နှလုံးခုံ
နေတာ၊သွေးစီးဆင်နေတာ၊အစရှိသ့ဖြင့်အစိတ်အပိုင်းပေါင်း၃၆၀ ဟာ သူအလို့လို့ညွန်ကြားထားတဲ့
သက်သေတွေကို တွေကြရမှာပါ၊ တချို့ကလည်းဒါက သဘာဝတရားကြီးကြောင့်ဖြစ်နေတယ်၊မိမိ
လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားကြောင့်ဖြစ်နေတယ် ၊ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးပြောကြ
ပေမယ်တစ်နေတော့အမှန်တရားကို သေသေချာချာတွေမြင်ကြရမှာပါ၊ အဲဒီနေ့ အမှန်တရားကို
အမှန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေ၊ သက်သေတွေကို သေသေချာချာလေ့လာပြီးအမှန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေလို့ . . . .
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့..”ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘ၀ါ..” ကိုလက်ခံတာပါ…။
ပို့စ်ထဲမန့်ထားတဲ့.. အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်ကို တတ်နိုင်သလောက် ခေးအော့သီအိုရီနဲ့..ဆက်စပ်ရှင်းပြထားခဲ့ဖူးတယ်..။
ဒီခေးအော့သီအိုရီအရ.. ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းချက်ကလေးတွေကိုယ်စီနဲ့.. ဆက်စပ်ပြီး.. ဂယက်ထသလိုဖြစ်ကြတာပါ..။
သွေးစီးဆင်းတာက.. နှလုံးကညစ်ထုတ်လိုက်တဲ့.. ပရက်ရှာ(တွန်းအား-စုတ်အား) ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး.. နှလုံးခုန်တာက..နှလုံး ကြွက်သားတွေက..ရုန်းကန်ညှစ်ထုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်.။ နှလုံးကြွက်သားဘာလို့ညှစ်ကြသလည်းဆိုတော့.. ကြွက်သားဆဲလ်တွေက လိုအပ်တဲ့အဟာရကို သွေးထဲကရလို့ဖြစ်ပါတယ်..။ သွေးကဘာလို့အာဟာရရသလည်းဆိုတော့.. လူကအသက်ရှု.. အစာစားလို့ဖြစ်ပါတယ်..။ လူကဘာလို့အသက်ရူအစာစားသလဲဆိုတော့.. နှလုံးကခုန်လို့ဖြစ်ပါတယ်.. စသဖြင့်.. အပြန်အလှန်အကျိုးအကြောင်းနဲ့.. ဖြစ်ကြပါတယ်..။ ဒီအတုိင်းပဲ.. အဆုပ်.. အသည်း.. ဦးနှောက် ဆက်စပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..
အသေးဆုံးထိ..လိုက်မယ်ဆိုရင်.. ဒီအန်င်အေ၊ ဂျင်းန်..၊ ကာဗွန်ကွန်ပေါင်း..၊ ပရိုတွန်..အီလက်ထရွန်..နှူထရွန်.. စသဖြင့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒါလေးတွေကနေ.. အခုဆို.. ဖိုတွန်- ဂေါ့ပါတီကယ် လို့အမည်တတ်တဲ့.. အထိသေးမွှားတာလေးတွေတွေ့ပါပြီ..။
ကျုပ်အမြင်အရတော့.. ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှ ဖန်တီးဖြစ်နေတာမဟုတ်.. အပြန်အလှန်သဟဇာတ..အညမညနဲ့..ဆက်စပ်ဖြစ်ပျက်နေတာလို့ပဲ..
ဘုရားက “အဲဒီအယူ ငါမယူ” ဆိုတာ ပညတ်အရာအားလုံးကနေ ဝါသနာပါမကျန် လွတ်မြောက်တာကိုပြောတာ။ စကားအနေနဲ့ မသုံးရင် ပြောစရာမရှိလို့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အသင့်တော်ဆုံး စာလုံးကို ခေတ္တယာယီ သုံးတဲ့ သဘောပဲ။သဂျီးလည်း မယူဘူးဆိုတာလည်း အဲဒီအတိုင်း နားလည်နိုင်ပါစေ။ သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော် စကားနဲ့ ဘာသာပြန်ရင် “စိတ်ကလေး လွတ်လပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး.. အလုံးစုံ လွတ်လပ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ နေခိုင်းတာ” ကျနော်တို့လို ကျင့်ဆဲတွေကတော့ မယူဘဲနေတတ်ဖို့ ကြိုးစားစွန့်ရတယ်။ စွန့်ခြင်းပြုလုပ်နေရာမှာ မဟုတ်ဘူးနော်.. ပြုလုပ်ခြင်း စွန့်နေရမှာ…
အဲဒီလွတ်မြောက်မှုကို သဂျီးပေါဒဲ့ ခေးအော့သီအိုရီနဲ့ ပြန်တိုက်ကြည့်။ အညမည အမှီသဟဲပြုမှု ကြောင်းကျိုစပ်ဟပ်ခြင်းကို မငြင်းဘူး။ ဘုရားကလည်း မငြင်းခိုင်းဘူး သို့သော် အဲဒီမှာနစ်မနေနဲ့… လွတ်မြောက်ဖို့သာ ငါပေးတဲ့နည်းအတိုင်း အားထုတ်လို့ ခိုင်းသွားတယ်။ မြှားဒဏ်ရာ ရနေသူ မြှားဆိပ်ကုဖို့ အရင်လုပ်၊ မြှားဘယ်သူပစ် ဘယ်နေရာက လာသလဲ မစဉ်းစားနဲ့တဲ့။ ဒီလိုပဲ သံသရာပဲဆိုဆို ကြောင်းကျိုးပဲပြောပြော ဂျာအေးသူ့အမေရိုက် ပညတ်နယ်ထဲလည်နေ၊ အဟုတ်ထင်မနေဘဲ လွတ်ခွင့်ရှိတုန်း လွတ်မြောက်နိုင်တုန်း ကြိုးစားရုန်းပါ။
ဟူး..မောဒယ်… နှစ်လုံးထဲနဲ့ ဘောင်းဘီကျပ်နေသူနဲ့ ငြင်းရတာ…
( အဲဒီလွတ်မြောက်မှုကို သဂျီးပေါဒဲ့ ခေးအော့သီအိုရီနဲ့ ပြန်တိုက်ကြည့်။ အညမည
အမှီသဟဲပြုမှု ကြောင်းကျိုစပ်ဟပ်ခြင်းကို မငြင်းဘူး။ ဘုရားကလည်း မငြင်းခိုင်းဘူး )
အဲ့သည်လိုပြောလိုက်ရင် အတ္တ ဆိုတာက အလိုလိုနေရင်း ဓမ္မဖြစ်သွားမှာပေါ့
အပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသလိုဘဲ သဘာဝ ( ကံ ) ဆိုတာကို နေရာမပေး မစဉ်းစားလို့လဲမရဘူး
ဆိုခြင်တာက ဓမ္မကို အဓမ္မလုပ်နေတဲ့ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့သဘောကပျောက်နေတယ်လေ
ကြွက်လန့်ပြေးတိုင်း လိပ်ပြာက ထပျံဦးမှ
ဖြစ်နိုင်တာတွေကို ဟုတ်သလိုလိုလိုက်ပြီး အဓမ္မ တွေးလို့ရရင်ဗျာ
သူဂျီးမင်းဂ ဆယာကြောင်ဂျီးဂို အမြင်ကပ်ပီး
ငါ့သမီးဒေါ်ကလေးဂို မောင်အောင်ပုကြီးကိုပေးသနားဒယ်ကွာ ဆိုရင်
ကပု နင်ပေါချင်တာပေါ သမီးဒေါ်ဂလေးတော့ ထိပါနဲ့ကွာ၊ ငါ့နှလုံးသား ဆတ်ဆတ်တုန်အောင် နာတယ်။
ငါပြောတဲ့ အညမည သဘောဆိုတာ သမုတိသစ္စာလကွာ။ ပညတ်နယ်မှာ အမှန်တကယ် ရှိနေတာပဲ။ ငြင်းငြင်းမငြင်းငြင်း ပုထုဇဉ်တိုင်း ကြုံနေရတာပဲ။ ကံဆိုတာ ကိုယ်ကပြုတယ်ဆိုပေမဲ့ ခေးအော့သီအိုရီလို အပြန်အလှန် ရိုက်ခံမှုတွေရှိနေတာပဲဟာ။ ကံပြုတိုင်း လိုရာဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာ။ ဥပမာ ကုသိုလ်ရဖို့ ဘုရားသွားပေမဲ့ စီတုံးဂေးကို တွေ့တဲ့အခါ နင်ပြစ်မှားလို့ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ ပြုရာတခြား ရရာတခြားလေ။
ဘုရားက သူ့သာသနာမှာ လူတိုင်း အရိယာ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိလို့ ဒါနမှု၊ သီလမှု၊ သမထဘာဝနာမှုတွေ လက်ခံပေးတယ်။ ဒီဘဝ ညဏ်မဖြစ်ရင် သုဂတိလားမှ နောင်အခွင့်သာမယ်၊ အပါယ်တခါလားရင် တော်ရုံနဲ့ လူနတ်ပြန်မဖြစ် ဆိုထားတာကိုး။ ဓမ္မသက်သက်ပဲဆို ဖြစ်ပျက်တလုံးပဲ ရှုခိုင်းတော့မှာပေါ့။
ကြားဖူးတာလေးတစ်ခု ကမ္ဘာကြီး က ဟိုကျမ်းထဲမှာ ပြားတယ်ဆိုလား
သဘာဝလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဆိုရင် ……….. မပြောတော့ပါဘူးကွာ နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်တော့မယ် :cool: